FIIRSO tababar Muqdisho loogu sameynayo caruur ka qeyb qaadaneysa xuska 26ka June iyo 1da Lulyo – War La Helaa Talo La Helaa
FIIRSO tababar Muqdisho loogu sameynayo caruur ka qeyb qaadaneysa xuska 26ka June iyo 1da Lulyo
By Jabra Shaaciye	 Last updated Jun 24, 2019
Magaalada Muqdisho waxaa si xoogan uga socda u diyaar garow xuska maalmaha xorriyadda dalka Soomaaliya ee 26ka June iyo 1da Lulyo, iyadoo xeryaha ciidamada Dowladda federaalka ay ka socdaan qabanqaabo xoogan.
Xarunta dugsiga Booliska magaalada Muqdisho ayaa waxaa tababar uga furmay tiro caruur ah, kuwaasi oo loo tababaro ciyaarta feerka ee Juudowga loo yaqaano, waxaana tababarkaasi oo socda muddo ku dhow toddobaad haatan loo soo xiray.
Ciyaarta Juudowga oo dalkeena laga ciyaaro ayaa qeyb ka ah tababarada ciidamada Booliska kahor inta aan askarnimo loo tababarin, iyadoona la filayo inay soo bandhigaan waxyaabihii ay barteen dabaaldegga maalmaha xorriyadda dalka.
Dhinaca kale Dowladda Federaalka ayaa horay u sheegtay in isbedel xoog leh ay ku sameyneyso ammaanka caasimadda maalmaha ay socdaan xusaska iyo dabaaldegyada labada munaasabadood ee muhiimka ah.
DEG DEG+FIIRSO: Madaxweyne M/Goboleed oo la dilay,RW Kheyre oo ku wajahan & shirqoolka Villa Somalia ee Xaaf
Akhriso: Xaaf oo wax ka bedelay Mowqifkiisa ogolaadayna doorasho waqtigeeda ku dhacda